चीन पाउडर Auger भराव निर्माण र कारखाना | शीर्ष
शंघाई माथिल्लो समूह एक बरफ भर्न मेसिन निर्माता हो। हामी राम्रो उत्पादन क्षमता को रूप मा राम्रो संग auger पाउडर भराव को उन्नत टेक्नोलोजी छ। हामी सर्वो बरमा फिलर उपस्थिति पेटेंट छ।
शीर्ष पैकिंग बरमा भराव
यसको शीर्ष मा, हाम्रो औसत उत्पादन समय मानक डिजाइन मा मात्र7दिन हो।
यसबाहेक, हामी तपाइँको आवश्यकता अनुसार बरमा फिलर अनुकूलित गर्ने क्षमता छ। हामी तपाइँको डिजाइन कोर्ने को आधार मा र तपाइँको लोगो वा मेशिन लेबल मा कम्पनी जानकारी संगै बरमा फिलर उत्पादन गर्न सक्छौं। हामी पनि auger भराव भागहरु आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ वस्तु कन्फिगरेसन छ, हामी पनि विशिष्ट ब्रान्ड को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सर्वो बरमा भराव को प्रमुख प्रविधि
Motor इमदादी मोटर: हामी ताइवान ब्रान्ड डेल्टा सर्वो मोटर को उपयोग auger नियन्त्रण गर्न को लागी, ताकि भरने वजन को उच्च सटीकता सम्म पुग्न को लागी। ब्रान्ड नियुक्त गर्न सकिन्छ।
एक servomotor एक रोटरी actuator वा रैखिक actuator कि कोणीय वा रैखिक स्थिति, वेग र त्वरण को सटीक नियन्त्रण को लागी अनुमति दिन्छ। यो एक उपयुक्त मोटर स्थिति प्रतिक्रिया को लागी एक सेन्सर संग मिलेर बनेको छ। यो पनि एक अपेक्षाकृत परिष्कृत नियन्त्रक, अक्सर एक समर्पित मोड्युल विशेष गरी servomotors संग प्रयोग को लागी डिजाइन गरीएको आवश्यक छ।
■ केन्द्रीय घटक: बरमा को केन्द्रीय घटक बरमा फिलर को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो।
हामी केन्द्रीय घटक, प्रसोधन शुद्धता र विधानसभा मा राम्रो काम गर्छौं। प्रशोधन सटीकता र विधानसभा नग्न आँखा को लागी अदृश्य छन् र intuitively तुलना गर्न सकिदैन, तर यो प्रयोग को समयमा देखा पर्नेछ।
Concent उच्च एकाग्रता: सटीकता उच्च छैन यदि auger र शाफ्ट मा कुनै उच्च एकाग्रता छ।
हामी auger र सर्वो मोटर को बीच विश्व प्रसिद्ध ब्रान्ड शाफ्ट को उपयोग गर्दछौं।
■ प्रेसिजन मशीनिंग: हामी मिलिंग मेशिन सानो आकार बरमा, जो auger एउटै दूरी र धेरै सही आकार छ मिल गर्न को लागी प्रयोग गर्दछ।
■ दुई भरने मोड: वजन मोड र भोल्युम मोड को बीच स्विच गर्न सकिन्छ।
पाउडर भोल्युम एक राउन्ड घुमाएर तल ल्याइएको निश्चित छ। कन्ट्रोलरले गणना गर्दछ कि कती मोड्छ पेंच को लागी लक्ष्य भर्न वजन सम्म पुग्न को लागी बारी छ।
त्यहाँ भरिने प्लेट अन्तर्गत एक लोड सेल समय मा भर्न वजन मापन गर्न को लागी छ।
पहिलो भर्ने छिटो छ र मास भर्न लक्ष्य भर्न को वजन को 80% प्राप्त गर्न को लागी।
दोस्रो भर्ने ढिलो र सही छ समयको भरने तौल अनुसार बाकी २०% पूरक।
औगर फिलर मेसिन मूल्य
Auger भराव मूल्य वा बिक्री को लागी बरमा भराव प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
बरमा फिलर मिसिन प्रकार
अर्ध स्वचालित बरमा फिलर
अर्ध स्वचालित बरमा फिलर कम गति भर्न को लागी उपयुक्त छ। किनकि यो अपरेटर लाई फिलर मुनि प्लेट मा बोतलहरु राख्न को लागी र मैन्युअल रूप बाट भरे पछि बोतलहरु लाई सार्न को लागी आवश्यक छ। यो दुबै बोतल र पाउच प्याकेज ह्यान्डल गर्न सक्छ। हपर पूर्ण स्टेनलेस स्टील को विकल्प छ। र सेन्सर ट्यूनिंग काँटा सेन्सर र फोटोइलेक्ट्रिक सेन्सर को बीच छनौट गर्न सकिन्छ। तपाइँ हामी बाट पाउडर को लागी साना बरमा फिलर र मानक मोडेल साथै उच्च स्तर मोडेल बरमा फिलर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
≤ १०० ग्राम, ± ± २%; 100 - 500g, ± ± 1%
≤ १०० ग्राम, ± ± २%; 100 - 500g, ≤ ± 1%; ≥500g, ± ± 0.5%
1140 × 970 × 2200 मिमी
अर्ध स्वचालित बरमा फिलर पाउच क्लैम्प संग
यो अर्ध स्वचालित बरफ भर्नवालाथैली क्लैम्प संग थैली भरने को लागी उपयुक्त छ। थैली क्लैम्प पेडल प्लेट मुद्रांकन पछि स्वचालित रूपमा झोला समात्नेछ। यो भरे पछि ब्याग स्वतः हराउनेछ। TP-PF-B12 एक धूल र तौल त्रुटि कम गर्न को लागी भरिने बेला झोला उठाउन र झर्ने प्लेट छ किनकि यो ठूलो मोडेल हो। जब पाउडर भरण को अन्त्य बाट झोला को तल सम्म वितरित, गुरुत्वाकर्षण त्रुटि नेतृत्व हुनेछ किनकि त्यहाँ लोड सेल पत्ता लगाउन वास्तविक समय वजन छ। प्लेटले झोला उठाउँछ ताकि भरिने ट्यूब झोलामा टाँसिन्छ। र प्लेट भरिने क्रममा बिस्तारै खस्छ।
1 किलो - 50 किलो
1-20kg, ± ± 0.1-0.2%,> 20kg, ≤ ± 0.05-0.1%
२-२५ प्रति मिनेट
1130 × 950 × 2800 मिमी
लाइन-प्रकार स्वचालित बरमा फिलर बोतलहरु को लागी
लाइन-प्रकार स्वचालित बरफ भर्नवालापाउडर बोतल भर्न मा लागू हुन्छ। यो पाउडर फीडर, पाउडर मिक्सर, क्यापिंग मिसिन र लेबलिंग मिसिन एक स्वचालित प्याकि line लाइन बनाउन को लागी जोडिएको गर्न सकिन्छ। कन्वेयर बोतलहरु भित्र ल्याउँछ र बोतल स्टपर बोतलहरु पछाडि राख्छ ताकि बोतल होल्डर भर्न को लागी बोतल उठाउन सक्छ। कन्वेयर बोतलहरु लाई स्वचालित रूप बाट भरे पछि अगाडि सार्दछ। यो एक मेशिन मा विभिन्न आकार बोतल ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ र एक भन्दा बढी आयाम प्याकेजहरु छन् जो प्रयोगकर्ता को लागी उपयुक्त छ।
रोकिने स्टेनलेस स्टील र पूरै स्टेनलेस स्टील हपर वैकल्पिक छ। त्यहाँ दुई प्रकारका सेन्सर उपलब्ध छन्। र यो धेरै उच्च परिशुद्धता प्राप्त गर्न अनलाइन तौल समारोह जोड्न अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
रोटरी स्वचालित बरमा फिलर
रोटरी बरफ भर्नवाला उच्च गति संग बोतलहरुमा पाउडर भर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। बगर भराव को यो प्रकार को ग्राहक जो केवल एक वा दुई व्यास आकार बोतलहरु को लागी उपयुक्त छ किनकि बोतल पा wheel्ग्रा मात्र एक व्यास संभाल्न सक्छ। जे होस्, सटीकता र गति लाइन प्रकार बरमा फिलर भन्दा राम्रो छ। त्यो को शीर्ष मा, रोटरी प्रकार अनलाइन तौल र अस्वीकृति समारोह छ। फिलर वास्तविक समय भरने वजन अनुसार पाउडर भर्नेछ, र अस्वीकृति प्रकार्य पत्ता लगाउने र अयोग्य वजन बाट छुटकारा पाउने छ।
मेशिन आवरण वैकल्पिक छ।
≤ १०० g, ± ± २% १०० - ५०० g, ± ± १%
≤ १०० ग्राम, ± ± २%; 100 - 500g, ≤ ± 1% ≥500g ， ± ± 0.5%
20-50 पटक प्रति मिनेट
20-40 पटक प्रति मिनेट
1840 × 1070 × 2420 मिमी
पाउडर को लागी डबल हेड बरमा फिलर
डबल हेड बरमा फिलर उच्च गति भर्न को लागी उपयुक्त छ। अधिकतम गति र १००bpm पुग्न। जाँच तौल र अस्वीकार प्रणाली महंगा उत्पादन बर्बाद रोक्न को कारण उच्च सटीकता वजन नियन्त्रण को। यो व्यापक रूप मा दूध पाउडर उत्पादन लाइन मा प्रयोग गरीन्छ।
डबल लाइन दोहोरो फिलर अनलाइन तौल संग भर्न
-160-135 मिमी; एच 60-260 मिमी
100-500g, ± ± 1g; ≥500g, ≤ ± 2g
१०० क्यान/मिनेट (#५०२) भन्दा माथि, १२० क्यान/मिनेट (#३०० ~#४०१) माथि
पाउडर प्याकि system प्रणाली
जब auger फिलर प्याकिंग मिसिन संग काम गर्दछ, यो एक पाउडर प्याकिंग मिसिन बन्छ। यो रोल फिल्म थैली भर्न र सील मेशीन बनाउने, वा मिनी doypack प्याकिंग मिसिन र रोटरी पाउच प्याकि machine मिसिन वा preformed थैली संग जोड्न सकिन्छ।
बरमा फिलर सुविधाहरु
Filling उच्च भर्न सटीकता सुनिश्चित गर्न बरमा टर्निंग।
Touch टचस्क्रिन संग पीएलसी नियन्त्रण, जो संचालित गर्न सजिलो छ।
Motor इमदादी मोटर स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न बरमा चलाउँछ।
■ छिटो बिच्छेद कूदने उपकरण बिना सजीलो सफाई छ।
■ सम्पूर्ण मेसिन स्टेनलेस स्टील 304 सामाग्री हो।
Weigh अनलाइन तौल समारोह र सामग्री को अनुपात ट्र्याकि material सामग्री घनत्व को परिवर्तन को कारणले भरने तौल परिवर्तन को कठिनाई लाई पार गर्दछ।
Easy सजिलो पछि पछि प्रयोग को लागी कार्यक्रम मा व्यञ्जनहरु को 20 सेट राख्नुहोस्।
A बरमा बदली बिभिन्न वजनहरु संग बिभिन्न उत्पादनहरु लाई प्याक गर्न को लागी, ठीक पाउडर बाट कणहरु।
Sub घटिया वजन अस्वीकार को समारोह संग।
कन्फिहुरेशन सूची। ए,
पाउडर स्विच गर्दै
1000 ग्राम Poise
सी: उपकरण बक्स
स्लट गरिएको पेचकश
बरमा फिलर विवरण
1. वैकल्पिक हपर
आधा खुला हपर
यो स्तर विभाजित कूदनेवाला छ
खोल्न र सफा गर्न सजिलो।
संयुक्त कूदनेवाला धेरै ठीक पाउडर को लागी उपयुक्त छ किनकि कूदनेवाला को तल्लो भाग मा कुनै अन्तर छैन
२. भर्ने मोड
वजन मोड र भोल्युम मोड को बीच स्विच गर्न सकिन्छ।
वजन मोड उच्च सटीकता तर कम गति छ।
भग्ने मोड: अन्य आपूर्तिकर्ताहरु 'मात्र एक मोड बाट भरी fillers
शंघाई शीर्ष समूह: पेंच प्रकार
को लागी कुनै अन्तर छैन
भित्र लुकाउन पाउडर,
र सफा गर्न सजिलो
अन्य आपूर्तिकर्ताहरु: ह्या Hang्ग प्रकार
त्यहाँ झुन्ड्याउने जडान भाग भित्र लुक्ने पाउडर हुनेछ, जुन सफा गर्न गाह्रो छ, र खराब पनी प्रदूषित ताजा पाउडर बन्द हुनेछ।
4. हात पा wheel्ग्रा
शंघाई शीर्ष समूह
यो बोतल/झोला फरक उचाई संग भर्न को लागी उपयुक्त छ। हात पा wheel्ग्रा माथि र तल फिलर घुमाउनुहोस्। र हाम्रो धारक बाक्लो र अरु भन्दा बलियो छ।
पूर्ण वेल्डिंग, हपर किनारा सहित।
6. मोटर आधार
सम्पूर्ण मिसिन आधार र मोटर को धारक सहित SS304 बाट बनेको छ, जो बलियो र उच्च स्तर हो।
मोटर को धारक SS304 छैन।
8. दुई उत्पादन पहुँच
योग्य भरण संग बोतलें
वजन एक पहुँच को माध्यम बाट जान्छ
अयोग्य भरण संग बोतलहरु
वजन स्वतः अस्वीकार गरिनेछ
बेल्ट मा अन्य पहुँच को लागी।
9. बिभिन्न आकार मापन बरमा र नोजल भर्न
बरमा फिलर सिद्धान्त यो हो कि पाउडर को भोल्युम एक सर्कल घुमाएर तल ल्याइएको निश्चित छ। तेसैले विभिन्न आकार को बरमा बिभिन्न भरिने तौल दायरा मा उच्च सटीकता पुग्न र अधिक समय बचाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ प्रत्येक आकार बरमा को लागी सम्बन्धित आकार बरमा ट्यूब छन्।
उदाहरण को लागी, दीया। 38mm पेंच 100g-250 भर्न को लागी उपयुक्त छ
अनुसरण auger आकार र सम्बन्धित भरिने वजन दायराहरु छन्
कप आकार र भरिने दायरा
यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि तपाइँको उपयुक्त बरमा आकार, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाइँको लागी सबै भन्दा राम्रो उपयुक्त आकार बरमा छनौट गर्नेछौं।
बरमा फिलर कारखाना शो
बरमा फिलर प्रशोधन
कम्प्यूटर सहायता डिजाइन
बगर फिलर कसरी राख्ने?
Stir हलचल मोटर चेन मा एक पटक तीन वा चार महिना मा एक सानो तेल जोड्नुहोस्।
Hop हपरको दुबै छेउमा सील पट्टी लगभग एक बर्ष पछि बूढो हुन्छ। यदि आवश्यक भए उनीहरुलाई बदल्नुहोस्।
■ समयमा सफा हपर।
अघिल्लो: रिबन ब्लेंडर
अर्को: रोटरी प्रकार पाउच प्याकि machine मिसिन
पाउडर को लागी बरमा फिलर
Auger फिलर बिक्री को लागी
बरमा फिलर मेसिन
Auger फिलर मेसिन मूल्य
Auger फिलर प्याकिंग मिसिन
Auger फिलर पार्ट्स
Auger फिलर मूल्य
बरमा फिलर सिद्धान्त
सर्वो बरमा फिलर
सानो Auger भराव
टेबल शीर्ष Auger भराव